Munyori, Munyori ... Aya Matipi gumi Anogona Kubatsira Nguva Dzose | Zvazvino Zvinyorwa
Mupepeti, munyori ... Aya matipi gumi anogona kubatsira nguva dzose
Avo vedu vanogara vachinyora kana kunyora vanofanirwa kufunga nezvazvo mamwe mazano anodikanwa. Ndivo vanotibatsira gadzirisa mazano edu uye kutaura kuzviisa muhurongwa uye kuzvitaura zvakajeka sezvinobvira. Eheka, kunyora kwekugadzira hakuna kufanana nekunyora zvemukati zviri sei. Vaverengi uye vezvenhau vanogona kuve vakasiyana uye neshoko zvakare. Asi izvi 10 tips Izvo zvinogona kuiswa kune chero chikamu chekunyora, kuchichinjisa kwavari, hongu. Ngatione zvavari. Tinogona kuwedzera zvimwe?
1 1. Ngatinyorei kana tiine mazano akajeka.
2 2. Paunowedzera kuverenga, zvirinani zvichazonyorwa.
3 3. Kurongeka kwakanakisa kwemutsara ndiko kune musoro: chidzidzo, chiito uye zvinozadzisa.
4 4. Ngatirambei tichifunga kuti ndivanaani vatiri kutaura navo uye ndiani anoverengera isu.
5 5. Chenjedzo nekushandiswa kweiyo izwi rekungoita.
6 6. Ngatiponesei mitsara mirefu. Vanowanzovhiringidzika.
7 7. Ngatiedzei kudzivisa kuwedzerwa kwezvipikisheni.
8 8. Ngatiregei kudanana zvakanyanya nemagwaro edu. Ngatiisei chinhambwe.
9 9. Ngatisatye kutya kuyambuka.
10 10. Ngativerengei zvakare, kuongorora uye kugadzirisa.
1. Ngatinyorei kana tiine mazano akajeka.
Zvimwe ndicho chinhu chakanyanya kukosha. Simbisa iyo yekutanga pfungwa kana chinzvimbo izvo zvinomuka kwatiri kuti tizvigadzirise uye zvijekese. Uye zvechokwadi isu tave padhuze kubva muduramanzwi kuenda kune chero imwe yekubvunza zviwanikwa kugadzirisa iyo mitauro, semantic kana chiperengo kusahadzika kunogona kumuka. Isu tinowana vazhinji paInternet vakaita se RAE, the Panhispanic Duramazwila Ndakavamba, the Instituto Cervantes nevamwe vashoma.
2. Paunowedzera kuverenga, zvirinani zvichazonyorwa.
Uye mune izvo ini ndinofunga vese vaverengi nevanyori vanobvumirana. Uye hachisi chiitiko chatinoshaya nekuti zvirokwazvo tiri kugara tichichiita. Kana zvisiri zvekumanikidza, zviri kunze kwebasa kana zororo. Iyo poindi ndeyekuti pamusoro peiyo cherechedza yezviri mukati, ngatiiseiwo munzira.
3. Kurongeka kwakanakisa kwemutsara ndiko kune musoro: chidzidzo, chiito uye zvinozadzisa.
Isu tatoziva kuti wakapfuma, wakawandisa uye unoumbika mutauro wedu. Zviverengero zvake, kutendeuka kwake uye kuchinjika kwake, asi kuna Kesari zviri zvaKesari uye Yoda mudzidzisi chii cha Master Yoda. Zviri nyore kwazvo kuchengetedza kurongeka kwechirevo.
4. Ngatirambei tichifunga kuti ndivanaani vatiri kutaura navo uye ndiani anoverengera isu.
Zviripachena kuti vaverengi veiyi blog havana kufanana neyaPaulo Coelho, Kafka, iyo Marca kana iyo bhajeti mushumo kubva kudhipatimendi reakaunzi. Kana nesuwo sevaverengi hatisi kuisa maziso akafanana nezve ichi chinyorwa nezve Cinderella patakaverengera vana vedu. Zvakare kufurira magariro uye tsika zvinhu izvo zvatinogona kufungidzira zvemuverengi iyeye. Saka kutanga pane zvese izvo mutauro wakajeka, wakapusa uye unowanikwa kune wese munhu, pasina kukanganwa imwe mhando, hongu.
5. Chenjedzo nekushandiswa kweiyo izwi rekungoita.
kubudikidza kutapuriranwa kwechirungu, Zvakajairika kuti uone kuti boka revanyori venyika ino rinofarira kushandisa sei izwi rekungoita mumisoro mikuru, intros kana zvirimo zvezvinyorwa zvavo. Asi zvinoitika uyu mutauro wedu unoshanda mune rinoshanda izwi, ndiko kuti, ndizvo zvidzidzo zvinoenderana, kwete zvinhu. Ngatitangei nyeredzi muchiitiko, ngachirege kutibata.
6. Ngatiponesei mitsara mirefu. Vanowanzovhiringidzika.
Vamwe vedu tine hobby ine ngozi uye ini ndiri kuzvibatanidza. Semunyori wekugadzira ini ndinowanzoita mitsara mirefu iyo dzimwe nguva ndinogona kugona uye dzimwe nguva kwete zvakanyanya. Nekudaro, ngatitii nekunyora bhuku rinozvipa rusununguko rwakawanda muchitaera kana izvo zvatinoda kuratidza zvinoda urefu. Asi pakunyora isu tinofanirwa kuyedza kunyatso uye svika pakutaura. Ngatidzorai avo vari pasi, iwo maappositions uye iwo akatanhamara Kana kuti ngatisatandare navo.
7. Ngatiedzei kudzivisa kuwedzerwa kwezvipikisheni.
Dzimwe nguva tinozvibvumira kutorwa nemanzwiro, kuora mwoyo kana kutsamwa uye tinoenderera mberi tichireva kana kutaura. Paunenge uchinyora zvemukati, unofanirwa edza kutiza kubva kuzviisa pasi zvishoma zvakasikwa izvo zvatiinazvo.
8. Ngatiregei kudanana zvakanyanya nemagwaro edu. Ngatiisei chinhambwe.
Isu tese tinozviita zvinoshamisa uye tinozviziva. Kunze kwezvo, ivo vakatiudza. Kunze kwezvo, isu takazvitenda. Isu takanyora yakatenderera chinyorwa, chaizvo. Chaizvoizvo, isu tinogara tichidaro. Pamwe zuva rakapfupika kana kuti rakatidhurira zvakanyanya kana isu tinofarira chidzidzo zvishoma, asi isu hatikundike. Tine kubata, chipo. Isu takazvarwa nepenzura pakati peminwe yedu, keyboard pasi pemaoko edu. Hapana munhu akaenzana isu tichigadzira mazwi nekuaisa pamwechete. Vamwe vanoshevedzwa tsamba bhodhi. Kwatiri, vadzidzisi. Zvakanaka izvo.
9. Ngatisatye kutya kuyambuka.
Izvo zvasara, izvo zvisinga wedzere, izvo zvisiri, izvo zvisingaridze bhero. Zvese izvo mawedzero-asingapi hapana. Zvakaoma. Iyo pleonasms vari chikamu chehupenyu hwedu uye ikozvino, mune huripo hwezvematongerwo enyika uye mitauro kururamisa, iyo euphemisms chingwa chedu chamazuva ose. Takazvitakudza ne kupatsanurana kwevanhurume nevanhukadzi (hatisisina bonde) uye dzimba dzekugadzirisa. Isu taifanira kudzidza kugara navo, asi isu tinogona kuzviponesa isu hwakawanda mashanga. Kana tichida, hongu.
10. Ngativerengei zvakare, kuongorora uye kugadzirisa.
Uye zvakare. Pasina kuneta. Uye kana tichikwanisa, chinhu chakakosha ndechekuti rega nguva diki ipfuure mushure mekuverengazve kwekutanga. Typo inogara ichioneka, izwi ratakange taisa mukati asi tisina kuisa, chinonyengera tittle. Inogona kunge iri maminetsi mashoma kana zuva, asi ngatiedzei. Zvichatibatsira zvechokwadi.
Saka manje? Tinogona here kuwedzera mamwe matipi?
mabviro: Cálamo uye Cran
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Mupepeti, munyori ... Aya matipi gumi anogona kubatsira nguva dzose
Francesc Flix Langa akadaro
Mangwanani akanaka, Mariola,
Semazuva ese, ini ndinoda yako blog (pamwe nekuti iri nyore, pedyo). Ndinofanira kubvuma kuti ini handigare ndine nguva yekuiverenga uye ndinosuwa yako nyowani yekupinda. Ndiri mubishi rekutsvaga basa uye zvinondibata, ndinoshushikana nekuita kuti mazuva ekutsvaga awedzere. Ini ndinofunga kuti handisati ndagona kuwana iyo yekubata yandinoda, uye ndinofanira kuiwana. Inyaya yekuedza here? Zvakanaka, hapana munhu anondirova pane izvo (ndiri mutambi). Ndine urombo, sekukuudza kwandakakuita kare ...
Zano rako rakakodzera kwazvo. Ini ndinonamira ne8. "Ngatiregei kudanana zvakanyanya nemagwaro edu." Zvichida nekuti ndiyo iyo inobata vamwe vese.
Ndatenda zvikuru, Mariola. Ini ndinokutevera, iwe unoziva, asi kwete senge zvandaida: chokwadi changu chinondimanikidza kuti ndive nepfungwa shanu mune izvo zvino zvinondibata zvakanyanya. Ngatigadzirise izvi kutanga uyezve iko kunyora, kuverenga uye zvese izvo zvakasarudzika zvematsamba uye nyaya zvinomirira kuti zviwanikwe seyeredzi, mudenga repfungwa dzedu, zvichauya, kuyedza kutora maziso ezvinotarisa pasi chete .
Pindura kuna Francesc Flix Langa
Mhoro Francesc. AL haisi bhurogi rangu, isu tiri vanoverengeka vatinogadzirisana navo, asi ndinokutendai nezvipikisheni zvinokodzera zvamunopa. Uye zvakawanda nekutenda nekutitevera.
Ndinoziva kuti iwe uripo uye ndinotoziva kuti zvinhu zvekutanga kutanga nekuti ini ndinonyatsonzwisisa mamiriro aunozviwana uri. Chinhu chakanaka ndechekuti iwe unotora iwo maminetsi ekuverenga mazuva ese. Saka huya, hushingi hwakawanda uye simba rakawanda uye isu tichazvipira isu rimwe zuva kune zvinyorwa.
Ana Mª García Vanogona akadaro
Mhoro Miss. Ndini Floro uye ndinonyora, pamwe nevamwe vandinoshanda navo, paAna Mª García Yuste's blog elabrigodepuas.es. Ini ndinoda kuraira kwake zvakanyanya asi kune mamwe andisingazive kuti ndichazviita sei nekuti handifunge kuti ndakwanisa mitsara mirefu, kunyangwe ndichidarika hongu, iye anozvininipisa uye anoziva iyeye inofanirwa kubvisa zvakanyorwa zvisizvo. Kune vamwe vese, kunze kwezvipikisheni nezwi rekungoita, zvinoita seni kuti ini ndinozvidzorawo, kunyanya chidzidzo, chiito nekuzadzisa kubvira, pandinonyora, ndinonyanya kuratidza. Handichadi kumuvaraidza futi. Iwe une yakanaka blog. Kutsvoda kwakawanda
Pindura kuna Ana Mª García Yuste
Kutenda nematauriro ako, asi iri bhurogu rinobva kuna AL uye isu tiri vashoma vapepeti vanoshanda pazvinyorwa izvi, heh heh.
Iwo matatu akanakisa mabhuku aKazuo Ishiguro, iyo nyowani Mubayiro weNobel muMabhuku
Kazuo Ishiguro, 2017 Mubayiro weNobel Wemabhuku